Ganacsiga baabuurta ee Afrika oo isbadal weyn ku yimid – XOGMAAL.COM
By MN USA	 Last updated Apr 12, 2019
Ganacsiga baabuurta ee qaaradda Afrika ayaa isa soo badalaysa iyada oo shirkadaha waa weyn oo ay ku jiraan kuwa baabuurta casriga ah ka ganacsado ee ay BMW ka mid tahay ay ku tartamayaan. Gaadiidka Afrika laga wato ayaa instiisa badan u badan kuwo gacmo kale soo marey oo dug iyo dug xigeen ah oo carabtaiyo Jabaan laga keeno.
Balse, hada waxaa soo badanaya baabuurta cusub iyo shirkada soo saaro oo loolan ugu jira suuqa ganacsiga gaadiidka ee qaaradda Afrika. Dowladaha Afrika oo ay Kenya ka mid tahay ayaa wax ka badaley sharciyada gaadiidka iyo ogolaashaha baabuurta mari karta jidadka xujooyin loo sameeyey.
1% baabuurta cusub ee dunida ayaa hada laga helaa Afrika, intooda badan waxa laga isticmaalaa wadanka Koonfur Afrika. Taasna hada waa ay isbadaleysaa maadaama aya shirkadaha Volks Wagen, BMW, Nissan iyo Toyota ay xarumo ka furanayaan wadamada Nayjeeriya, Kenya, Ruwanda iyo kuwo kale, ka dib marki ay wadajir uga shaqeeyeen in dowladaha Afrika dhaqangaliyaan sharciyo ka hortagaya in baabuur dug ah un loo soo daadiyo.
Isbadalkan ayaa 10% kor u qaadayo tirade baabuurta cusub ee Afrika laga isticmaalayo, taas qasaaro badan u keenayso ganacsatada yar yar ee gawaarida duugga ah ka ganacsato.